Kalvin Phillips Oo Jawaab Ka Bixiyay Inuu 60 Milyan Ugu Dhaqaaqo Kooxda Manchester United
HomeWararka CiyaarahaKalvin Phillips oo jawaab ka bixiyay inuu 60 Milyan ugu dhaqaaqo kooxda Manchester United
November 27, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay ku guuldareysan doonto qaab kasta oo ay ku dooneyso ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leeds United Kalvin Phillips .
Isagoo u ciyaarayay Lilywhites iyo England 15-kii bilood ee lasoo dhaafay, 25 jirkaan ayaa haatan loo arkaa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican booskiisa Yurub.
Man United oo doonaysa in ay ku xoojiso garoonka dhexdiisa ayaa si lama filaan ah loola xiriiriyay qaab ciyaareedka xiddigan.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Daily Star , Phillips ayaa diidi doona dalab kasta, oo ay u badan tahay inuu ku kacayo 60 milyan ginni, oo ka yimid Old Trafford si uu u sharfo xiriirka uu la leeyahay kooxdiisii ​​carruurnimada.
Warbixintu waxay soo jeedinaysaa in Phillips uu ka feejigan yahay wax kasta oo dib u dhac ah oo isaga ama qoyskiisa ay kala kulmi karaan inay u dhaqaaqaan mid ka mid ah kooxaha xafiiltanka weyn ka dhexeeyo.
Phillips waxa uu weli haystaa in ka badan laba sano iyo badh qandaraaskiisa Elland Road,madaxda Leeds ayaa raba inay ku heshiiyaan shuruudo cusub sida ugu dhakhsaha badan.